तथ्यांकमा ७७२ आइसियु र ३९५ भेन्टिलेटर खाली! तर संक्रमितले पाउँदैनन् :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
तथ्यांकमा ७७२ आइसियु र ३९५ भेन्टिलेटर खाली! तर संक्रमितले पाउँदैनन् कुन प्रदेशमा कति आइसियु र भेन्टिलेटर? कति संक्रमित उपचाररत?
कमला गुरुङ आईतबार, वैशाख १९, २०७८, २०:२३:००
काठमाडौं - केही दिनअघि डा अनुप बास्तोलाले लेखेका थिए :
‘टेकु अस्पताल भरिसक्यो। थप बिरामी राख्ने संभावना न्यून छ। अब वार्डबाट आइसियुमा बिरामी सार्ने स्थिति छैन। रिफर गर्न अन्य अस्पतालमा खोज्दा बेड भेटिँदैन।’
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा अनुप बास्तोलालाई आइसियु र भेन्टिलेटरका लागि दिनमा कयौँ पटक फोन आउँछ। तर अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटर सहजै पाउन सकिने अवस्था छैन। बढ्दो बिरामीको चाप अस्पतालले थेगी नसक्नु छ।
उनी भन्छन्, ‘मोबाइलको घण्टी जति बज्छ, उति तनाव थपिन्छ। अधिकांश फोन आइसियु र भेन्टिलेटरको खोजीमा आउँछन्।’
आइतबार साँझ पनि अस्पतालमा शय्या खाली छैनन्। शुक्रराज अस्पतालमा मात्र होइन। कोरोनाको उपचार हुने देशभरका अस्पतालहरुको शय्या अहिले भरिभराउ छन्। सजिलैसँग आइसियु र भेन्टिलेटर पाउन सकिँदैन।
शय्या नपाएरै कतिपय संक्रमितको मृत्यु भएका खबर बाहिर आइरहेको छ।
आइसियु र भेन्टिलेटरका लागि घण्टौंसम्म कुरिरहेका बिरामीहरु अस्पतालमा धेरै भेटिन्छन्। स्वास्थ्यखबरले अस्पतालहरुमा गरेको स्थलगत अध्ययनका क्रममा पनि अस्पतालमा शय्या भरिएर संक्रमितलाई बाहिर कुराइरहेको फेला पारेका छ।
तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने देशमा आइसियु र भेन्टिलेटरको कुनै अभाव देखिँदैन।
मन्त्रालयले हरेक दिन सार्वजनिक गर्ने तथ्यांकमा पनि देशभर आइसियु र भेन्टिलेटरको खाली रहेको देखाउँछ।
मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार देशभर १ हजार २ सय ४९ आइसियु र ५२६ भेन्टिलेटर छ। जसमध्ये ४७७ आइसियु र १३१ भेन्टिलेटरमा संक्रमितको उपचार भइरहेको छ।
मन्त्रालयकै तथ्यांक अनुसार अझै पनि ७७२ आइसियु र ३९५ भेन्टिलेटर खाली देखिन्छ।
त्यसो भए संक्रमित भर्ना नभएका ती आइसियु र भेन्टिलेटर काहाँ छन् त?
यही प्रश्न हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीलाई सोध्यौँ। हाम्रो प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘यो सबै कोभिडका लागि छुट्याइएको बेड होइन। देशभर रहेका आइसियु र भेन्टिलेटरको संख्या हो।’
काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश अस्पतालहरु बिरामीले भरिएपनि उपत्यका बाहिरका अस्पतालमा अवस्था यस्तो नरहेको उनी बताउँछन्। शय्याको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भएको उनले बताए।
खाली भएका शय्या कहाँ कति छ भन्ने विषयमा प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग यकिन जानकारी हुने उनले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘हामीले पनि यहाँ राख्छौं। यो हामीले गर्नेभन्दा पनि यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश स्तरीय सामाजिक विकास मन्त्रालयको हो।’
कुन प्रदेशमा कति आइसियु र भेन्टिलेटर? कति संक्रमित उपचाररत?
बिरामी – ५४ आइसियु, १४ भेन्टिलेटर
शय्या – १५९ आइसियु, ७० भेन्टिलेटर
खाली – १०५ आइसियु, ५६ भेन्टिलेटर
बिरामी – २४ आइसियु, २ भेन्टिलेटर
शय्या – ५० आइसियु, २५ भेन्टिलेटर
खाली – २६ आइसियु, २३ भेन्टिलेटर
बिरामी – २५४ आइसियु, ७७ भेन्टिलेटर
शय्या – ५९१ आइसियु, २६५ भेन्टिलेटर
खाली – ३३७ आइसियु, १८८ भेन्टिलेटर
बिरामी – ५ आइसियु, १ भेन्टिलेटर
शय्या – २४१ आइसियु, ६७ भेन्टिलेटर
खाली – २३६ आइसियु, ६६ भेन्टिलेटर
बिरामी – ७७ आइसियु, २१ भेन्टिलेटर
शय्या – ११९ आइसियु, ६१ भेन्टिलेटर
खाली – ३९ आइसियु, ४० भेन्टिलेटर
बिरामी – ३३ आइसियु, २७ भेन्टिलेटर
शय्या – ४९ आइसियु, १७ भेन्टिलेटर
खाली – १६ आइसियु, १० भेन्टिलेटर
बिरामी – ३० आइसियु, ९ भेन्टिलेटर
शय्या – ४० आइसियु, २१ भेन्टिलेटर
खाली – १० आइसियु, १२ भेन्टिलेटर
सामाजिक सञ्जालमा चर्चित तस्विरका डा विनोद, जो कोरोना संक्रमणपछि सेवामा सक्रिय छन्
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा गौतमलाई प्रश्न: सरकारले अक्सिजन अभावको समस्या कसरी समाधान गर्दैछ? निजी अस्पतालले छिटो भन्दा छिटो आफ्नो अक्सिजन प्लान्टको व्यवस्था गर्नुपर्छ। बरु त्यसका लागि सरकारले के गर्नपर्छ? भन्सार छुट गरिदिने हो कि? ल्याउन सहजिकरण गरिदिने हो कि? १८ घण्टा पहिले
कोभिड वार्डमा कार्यरत नर्स भन्छिन्- मृत्यु संख्या छिट्टै कम भइदिए हुन्थ्यो लामो समय पिपिइ लगारहँदा श्वास फेर्न गाह्रो हुन्छ। अरु समयमा शरीर दुख्ने, थकाइ लाग्ने भइरहन्छ, जसको कारण अहिलेपनि संक्रमित छु झै लाग्ने रहेछ। कमजोरी अनुभव भइरहेको हुन्छ। १९ घण्टा पहिले
अस्पतालको शय्याबाट कोरोना संक्रमितको प्रश्न: पोजिटिभ हुनेले अरु रोगको उपचार नै नपाउने? म मात्रै होइन। त्यहाँ आउने धेरैजसो बिरामीलाई यस्तो व्यवहार गरेको पाएँ। भित्र अक्सिजन र बेड खाली हुँदा हुँदै पनि उनीहरुले खाली छैन भन्दै बिरामी कुराउने गर्थे। मंगलबार, वैशाख २८, २०७८